သာ။ ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လိင်လှုံ့ဆော်မှုကိုကြည့်ရှုခြင်း, Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD မှတ်ချက် - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနှင့်အတူကြည့်ရှုခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု Associated, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်: ရစ်ချတ်အေ Isenberg က MD ကမှတ်ချက်
ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD, Doi: 10.1002 / sm2.71
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 11 Jun 2015
© 2015 အဆိုပါစာရေးဆရာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာများအတွက်နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စား Wiley ကာလ, Inc တို့ကထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
Drs ၏ပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ်သို့။ Prause နှင့် Pfaus ၏လက်ရေးမူများမှာတွေ့ရသော“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း၊ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများကိုကြည့်ခြင်း” ဟုစာရေးသူ၏သူတို့၏အချက်အလက်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောကောက်ချက်များကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်တာဝန်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ အင်တာနက်မှတဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများများများရရှိနေခြင်းကြောင့်လူနာများအတွက်လူမှုရေး၊ ကာယပိုင်း၊ [1-5]။ ဒေါက်တာ Prause နှင့် Pfaus တို့သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအစီရင်ခံရသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခု - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီလေ့လာမှုဖြစ်ရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးတက်ဘယ်လိုမြင်ကြဘူး။
လေ့လာမှုလူ ဦး ရေ၏စာရေးသူဖော်ပြချက်သည်လုံးဝမပြည့်စုံပါ။ စာရေးသူများအနေဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောလေ့လာမှု (၄) ခုသည်လူ ဦး ရေ၏ရင်းမြစ်အဖြစ်ကိုးကားထားသည် 1) [6-9]; သို့သော်ထိုလေ့လာမှုစာမေးပွဲအပေါ်သို့ငါသည်ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အကဲဖြတ်သည့် 234 ယောက်ျားကသာအရင်းအမြစ် 280 နိုင်ပါတယ်။ လေးဆယ်ခြောက်ယောက်ျားပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်ဖြစ်ကြသည်။ စာရေးသူအဘယ်သူမျှမကသူတို့လေ့လာမှုလူဦးရေရဲ့ဇာစ်မြစ်ကို၏စာရင်းကိုင်မရလဒ်ကိုအစီအမံ၏အကဲဖြတ်ဘို့ရွေးချယ်ထားသော subpopulations ၏အရင်းအမြစ်များ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ပေး။ ဥပမာ, တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုမှာ  ဘာသာရပ်များ Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF) ၏အသုံးပြုမှုကိုမှတဆင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ 2013 ယောက်ျားထံမှ IIEF ရလဒ်များကိုအပေါ် 47 Prause စက္ကူအစီရင်ခံစာများ, သေး 133 ယောက်ျားအတွက် IIEF တွေ့ရှိချက်အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ၏စာရေးဆရာများ။ အဆိုပါ 86 လေ့လာမှုမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်ဤ 2013 နောက်ထပ်ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အချို့သောအခြား uncharacterized ဒေတာဘေ့စထဲကနေခဲ့ပါသလဲ အကွိမျမြားစှာကတခြားကှာဟလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နှင့်ကိုးကားသတင်းရင်းမြစ်များအကြားတွေ့ရှိ:
လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှာဖော်ထုတ် 1. ကွာခြားချက်များ
Erectile ရာထူးအမည်များ၏ IIEF = အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း။
အဆိုပါ 2013 Prause လေ့လာမှုဤဘာသာရပ်များများ၏သရုပ်ပါဝင်  လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်နောက်ထပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်။ ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၏မြင်ကွင်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းစဉ်တွင်, 47 Prause လေ့လာမှုအတွက် 2013 ယောက်ျားနေဆဲမဟုတ်ဘဲရုပ်ရှင်ထက် photographs ပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာနေဆဲဓာတ်ပုံတွေများ၏မြင်ကွင်းတွင်အကဲဆတ်သောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် arousal တစ်ဦးအဆင့်ကိုထုတ်ပေးကြောင်းမဖြစ်နိုင်ပုံရသည် ။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဤဘာသာရပ်များလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒ၏သူတို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်ဟုညွှန်ပြဤဘာသာရပ်များအနေဖြင့်အချက်အလက်များ၏ပါဝင်မမျှတမှု, မဆိုစာရင်းကိုင်ဆက်ကပ်။ ထို့အပွငျကအခြားသုံးလေ့လာမှုများဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ဘာသာရပ်များပေးသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစာမူထံမှရှင်းပါတယ် [7-9] ကိုက်ညီမှုကြာချိန်၏အသုံးဗွီဒီယိုများ (20 စက္ကန့်မိနစ်3မှ) ။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများတူညီနေမှုမရှိဘဲ, အမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှကောက်ခံမှုအချက်အလက်များ၏တရားဝင်မှုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှု၏အဓိကအချက်အချာ - ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏နာရီများအကြောင်းဖော်ပြရေးသားထားသောစာရင်းဇယားများကိုရေးသားသူများကမပေးသောကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ စာရေးသူများက၎င်းတို့သည်အချက်အလက်များကို bins သုံးခုအဖြစ်စုစည်းထားကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြသော်လည်း (၂ နာရီထက်နည်းသော၊ ၂ နာရီထက်မပိုသော) သည်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သောဥပမာ၊ ပုံမှန်သွေဖီခြင်း၊ စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေသို့မဟုတ်မည်သည့်လူ ဦး ရေအဘို့အကြည့်ရှုခြင်း။ လူ ဦး ရေကိုအရေးပါသည့်သတ်မှတ်ချက်အရနားလည်ခြင်းမရှိဘဲစာဖတ်သူသည်လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်များကိုသူ / သူမ၏လူနာတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဘာသာပြန်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
အဆိုပါနာရီကြာ-ကြည့်ရှုအားပေး parameter သည်ကိုယ်တိုင်ကညံ့ဖျင်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ကျနော်တို့နာရီကြာ၏ Self-အစီရင်ခံစာရှေ့သီတင်းပတ်ကိုးကားလျှင်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်ပျမ်းမျှပြောသည်ကြသည်မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝအနက်ကိုလက်အောက်ခံမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ erectile သို့မဟုတ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများဖွံ့ဖြိုးဖို့လုံလောက်တဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ဘူးသောသူအသစ်က porn အသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောဘာသာရပ်များရှိခဲ့သလော ယခင်ကမကြာသေးမီကခုတ်လှဲသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သောမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောဘာသာရပ်များရှိခဲ့သလော ရေတွင်းတစ်တွင်း-defined နှင့်ကိုက်ညီ Reference ပျက်ကွက်ခြင်း, porn အသုံးပြုမှုကိုဒေတာ uninterpretable ဖြစ်ကြသည်။
ထို့ပြင်စာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်းညစ်ညမ်းပါသည်, စတင်ခြင်း၏အသက်, တင်းမာမှုများ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်ဆောင်သောကြရသောမိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာကြည့် parameters တွေကိုအစီရင်ခံကြဘူး [11,12]။ ထို့အပြင် hypersexual အမျိုးသားများ (အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုင်ကြားလေ့ရှိသောအမျိုးသားများ) ကဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်လေ့လာမှု၏ erectile function ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်မေးခွန်းထုတ်စရာများဖြစ်သည်။
ပိုပိုပြီးစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာက erectile function ကိုရလဒ်တိုင်းတာမှုအတွက်စာရင်းအင်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုစုဆောင်းထားတာပါ။ စာရေးသူအသုံးပြုသောစာရင်းအင်းစစ်ဆေးမှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုပါ။ မည်သည့်အချက်အလက်မျှထောက်ပံ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်သူများသည်နာရီနှင့်ချီ။ ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုတို့အကြားဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းသူတို့၏ခိုင်မာသောခိုင်လုံသောဖော်ပြချက်ကိုသာယုံကြည်ရန်စာရေးသူကစာဖတ်သူအားတောင်းဆိုသည်။ စာရေးသူ၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာအခိုင်အမာအားဖြင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်အတူ erectile လုပ်ဆောင်ချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်တွစ်တာတွင်၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအားဂုဏ်ယူစွာထုတ်လွှင့်ခြင်း ((https://twitter.com/NicolePrause/status/552862571485605890), စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏မရှိခြင်းအများဆုံးကွာဟဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာရေးဆရာရှင်းလင်းစွာသူတို့ရဲ့သုတေသနပြုစီမံကိန်းအများကြီးအချိန်နှင့်စွမ်းအင်မြှုပ်နှံ။ ဒါဟာသူတို့လေ့လာဆည်းပူးခြင်းသို့မဟုတ်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းညစ်ညမ်းအဆိုး erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ impact ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၎င်းတို့၏နိဂုံးချုပ်အပြစ်လွတ်စေလူဦးရေနှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူစာဖတ်သူကိုပေးဘူးသောကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြို့သောအရိပ်အယောင်အကျဉ်းညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့် nonporn-စွဲယောက်ျားလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်ခဲ့ကြပေမည်သောဒေတာများရှိနေစဉ်, ဒီခဲတဲ့ဝတ္ထုတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။
1 Yoder VC ကို, Virden တီဘီ, အီဒီအာမင် K. အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အထီးကျန်: တစ်ခုကအသင်းအဖွဲ့? လိင်စွဲ compulsive 2005; 12: 19-44 ။
2 Boies SC, Cooper က AI အ, Osborne CS ။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးလူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အင်တာနက်-related ပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အပြောင်းအလဲတွေဟာ။ Cyberpsychol ပြုမူနေ 2005; 7: 207-240 ။
3 Schneider ဂျေမိသားစုအပေါ် compulsive ကျဘာအပြုအမူတွေ၏သက်ရောက်မှု။ လိင်ဆက်ဆံရေး Ther 2003; 18: 329-354 ။
4 Philaretou AG, Mahfouz A, Allen K. အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးသားများ၏သုခချမ်းသာကိုအသုံးပြုခြင်း။ Int J Mens ကျန်းမာရေး 2005; 4: 149-169 ။
5 Twohig အမတ်, Crosby သည် JM, ကော့ JM ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း: ကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်နည်း လိင်စွဲ compulsive 2009; 16: 253-266 ။
6 Prause N ကို, Moholy M က, Staley C. ဘက်လိုက်မှု multidimensional လာခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ vs. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်: တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်ရှုထောင့်။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2013; 43: 463-472 ။
7 Prause N ကို, Staley ကို C, Roberts သည် V. တိုကျရိုကျ alpha asymmetry နှင့်လိင်လှုံ့ဆော်မှုပြည်နယ်များ။ Psychophysiology 2014; 51: 226-235 ။
8 Prause N ကို, Staley ကို C, Fong သည် TW ။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုသတင်းပို့ "hypersexuals" ၌စိတ်လှုပ်ရှားမှု dysregulation ၏အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထား။ လိင်စွဲ compulsive 2013; 20: 106-126 ။
9 Moholy M က, Prause N ကို, Proudfit GH, Rahman ကတစ်ဦး, Fong သည် T. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-စည်းမျဉ်းခန့်မှန်း။ Cogn Emotion 2015; 6: 1-12 ။
10 ယူလနျြအီးခေါ်ဆောင်သွားဆွငါးခုသည် Modes ဖြတ်ပြီးကျော် R. အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 1988; 17: 131-143 ။
11 Kuhn က S, Gallinat ဂျေဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2014; 71: 827-834 ။
12 Seigfried-Spellar KC, ရော်ဂျာ MK ။ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာကလူ့ပြုမူနေ 2013; 29: 1997-2003 ။
ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာအရမ်းကောင်းတဲ့လူတွေဆီကနေ porn ကိုသုံးတဲ့သဘောသဘာဝကိုပိုသိလာတယ်။ t.co/PHup5LLEd9